Ungakwazi ukwehlisa isisindo ihora elilodwa? - Ukuzivocavoca Umzimba
Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Ukuzivocavoca Umzimba > Unganciphisa kanjani isisindo ngehora - ukuxazulula kanjani
Unganciphisa kanjani isisindo ngehora - ukuxazulula kanjani
Ungakwazi ukwehlisa isisindo ihora elilodwa?
UkusebenzacanUsizowehlisa isisindofuthi ugcine.
Uthathe isinqumo sokuthi ufuna ukunciphisa isisindo, mhlawumbe uke waya emcimbini ofuna ukuwulungela, noma usinda kancane kunalokho ongathanda futhi ufuna ukuphila impilo enempilo nganoma yisiphi isizathu njalo, ulahlekelwe isisindo siyinto okumbalwa kuyo ngakho-ke sihlose kule ndatshana namuhla ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukubhukuda njengengxenye yohlelo lokwehlisa isisindo nokuthi ungakufaka kanjani njengokuzivocavoca okuhle - ukuqina komzimba, kepha kungani kunje lokhu kuhle, iphuzu eliyinhloko iqiniso lokuthi kukhona umthwalo osindayo ngaphambi kokuba amabala we-ile alimale uma kuqhathaniswa nokuthile okufana nokugijima futhi lokho kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi ukuzivocavoca ngokungaguquguquki futhi amathuba aphakeme anamathela kulesi sisindo- uhlelo lokulahleka, futhi ngaphezu kwalokho, uma uqhubeka ufundela endlini, izimo zizohlala zingaguquguquki unyaka wonke, ngakho-ke kuyaqhubeka ngosizo lweMotivat ion lapho kubanda futhi kumanzi ngaphandle ebusika futhi ama-re reamers angitshela ukuthi uhlala kuphi kuyashisa impela wena k manje usengakwazi ukuzivocavoca endlini kodwa ngishisa ngokweqile, kuthiwani ngokubhukuda okuhle ongakwenza, uma uhlela ukusebenzisa ukubhukuda njengendlela yakho eyinhloko yokushisa lawo makhalori ngakho-ke kufanele wazi ukuthi uchitha malini ubhukuda ngakho-ke udinga ukubhukuda ukuze ukwazi ukukufaka kulolu hlelo lokwehlisa isisindo. Bhukuda manje, njengoba isilinganiso esilinganisiwe sidla inani eliphindwe kasishiyagalombili inani lamakhalori uma kuqhathaniswa nokuphumula. Ngokusobala lokhu kuyehluka ngokungathi ubuphinda i-backstroke elula elula ngokwesibonelo ngovemvane noma ukukhasa okuqinile ngaphambili, kepha ukuze uthole ukuthula kwengqondo ushisa amakhalori aphakathi kwamakhulu amahlanu namakhulu ayisikhombisa ngehora lapho ubhukuda ngakho-ke ake sithathe ama-600 njengesilinganiso, kepha kwabesilisa kuphakeme kancane kunokwabesifazane futhi noma ngabe usinda futhi uyishisa kancane uma ufuna inombolo enembe kakhulu mayelana nokuthi ushise amakhalori amangaki esimisweni sendodana yakho kukhona maningi Kukhona i-catfish eminingi online, ngubani ongakusiza.
Ngokufanelekile ungathanda ukubhukuda ihora lonke, kepha siyaqonda ukuthi ngabe uphume isikhathi eside noma ukubhukuda akuyona inqaba yakho ngakho-ke lokhu kungabonakala kunzima ekuqaleni, ngakho-ke qala ngesikhathi esifushane sezizukulwane, lapho-ke lapho ungaqedela khona futhi wakhe, kepha empeleni yisikhathi osichitha kimi esinomthelela omkhulu enanini lamakhalori owashisayo kunamandla, ngakho-ke gxila kuleso sikhathi ubude futhi uzothola ukuthi uma uthola ulunge ngokwemvelo uzokwazi ukuthola ukushesha kancane noma kunjalo, futhi uma ubhukuda isikhashana ungahle uthande ukushintsha ijubane futhi ulihlanze ukuze nje wenze ukubhukuda kuthakazelise kancane Manje siyazi ukuthi kulungile ukunciphisa umzimba onakho ukuba nokuncane kodwa okungaguquki isikhathi eside Ukugcina ibhalansi yamandla umbuzo uwukuthi ugcina kanjani ngoba ukubhukuda kungena kuphi kahle kulo mxube? Sinezeluleko ezimbalwa zakho kanye nesayensi yokuzivocavoca ethokozisayo kuwe, isikhathi eside sokuvivinya umzimba sikhonjisiwe ukuthi sinomphumela omude ekunciphiseni isisindo futhi akwaziwa kahle ukuthi kungani, kodwa kukholakala ukuthi kuhlobene nokuhlela futhi lapho ubhala okuthile kudayari yakho ngakho-ke uthi kudingeka ukuthi ubhukude futhi inani elithile lezikhathi ngeviki futhi uligcine kudayari yakho, maningi amathuba okuthi uhambe bese kuthi ngemuva kwesikhashana uma uphoqelela lowo mkhuba kufanele ube yinto eyodwa nethuba elilula ngakho-ke le yingxenye elula, kepha uma ucabanga ukwehlisa isisindo udinga ukusihlela esithombeni esikhudlwana futhi kulapho udinga ukuhlela ukudla kwakho lapho kuziwa ekuhleleni kusengaphambili nokubhukuda ukuze unciphise umzimba ukusetshenziswa, udinga ukwazi ukuthi okuthile kuza ne-caveat encane yokuthi ingakwenza kanjani uzizwe ulambile futhi kunezifundo ezithile eziveze ukuthi ababhukudi bazizwa belambile kakhulu kunokukhangiswa ngemuva kokuhamba ngebhayisikili noma ukuzivocavoca lokhu kungenxa yehomoni es ezivela ekuqaleni lapho ubhukuda, ungazizwa ukuthi indlala yakho iyacindezelwa kepha hhayi isikhathi eside ngemuva kwalokho isifiso sakho sokudla sizokwenyuka kakhulu ngakho-ke kudingeka uqiniseke ukuthi ukuhlelile lokhu nokuthi unokudla okufanele, kepha uma ufuna ukwazi okuthe xaxa mayelana nokuthi kungani okuthile kukwenza ulambe nokuthi ungabhekana kanjani nakho sinendatshana ebuyekeziwe eyenziwe ngale ndaba, ngakho-ke hlola ku-GTN bese ucabanga ngohlelo lwakho lokwehlisa isisindo ngaphambili, njengoba ezinye izifundo zikhombisile ukuthi ukuntuleka kwesidlo sasekuseni kumosha ibhalansi yakho ye-hormonal usuku lonke futhi abantu abadla ukudla kwasekuseni kungenzeka babe sekuseni kakhulu Banamandla ngakho-ke bayakwazi ukwenza umsebenzi omningi futhi kungavimbela lokho isidlo esikhulu sasemini bese lokho kudilizwa kungena ngemuva kwalokho , lapho-ke engakwenza ufune noma ulangazelele ukudla okulula okushukela okufanele uzame ukukulwa nakho. Izeluleko Zokugcina Zokukusiza Ukunamathela Kuhlelo Lokwehlisa Isisindo Uma kuziwa kithina, umuntu angajoyina iqembu noma ngabe leyo iklabhu yasendaweni noma avele enze abanye abangane ukuyenza ibe mnandi kakhulu futhi ibe yingxenye yomphakathi yalokho bese ekugcineni ebeka okufushane nezinhloso zesikhathi eside, qiniseka ukuthi zenzeka ngokoqobo, bese uzama ukuzibamba uziphendulele, noma ngabe lokho kubhala phansi nomngane wakho noma mhlawumbe ukuwathumela nakwisabelo sakho semithombo yezokuxhumana ukuze abantu bakhumbule ukuthi mhlawumbe leli kungaba ibanga elithile lelo ufuna isikwele. Uhlaka Lwesikhathi Ofuna Ukubhukuda Ekupheleni Kosuku Ukwehlisa isisindo kuyinselele kubantu abaningi, kodwa kuyenzeka impela futhi ukubhukuda wedwa ngeke kukwenze lokho, kepha uma ukufaka ohlelweni olukhulu futhi uqiniseke Ukudla kwakho kuhloselwe kakhulu kukho, kungaba ithuluzi elihle ukukusiza wehlise isisindo futhi awukaze wazi ukuthi ungahlangana nabangane abathile ngenkathi usohambeni futhi uma ubhukuda njalo udlala njengebhonasi lapho umbhukudi wakho okwakho kuzothuthuka ngokwemvelo, ngakho-ke sicela usazise uma kungenzeka ukuthi ubhukuda ukuphatha isisindo sakho, noma unamanye amaqhinga noma amaqhinga ozowathola esebenza futhi ungakwenza lokho ngokwabelana esigabeni sokuphawula ngezansi nakuwo wonke ezinye iziteshi zenhlalo -Media ziyahlola bese zisinika iLike and Follow
Nginganciphisa kanjani isisindo samanzi ngehora?
Ukuvivinya umzimba kungaba enye yezindlela ezingcono kakhulu zokunciphisaisisindo samanziesikhathini esifushane. Noma yiluphi uhlobo lokuvivinya umzimba lukhulisa umjuluko, okusho ukuthi uzokwenzaalahlekelwe ngamanzi. Isilinganisouketsheziukulahlekelwa ngesikhathi esisodwaihoraUkuvivinya umzimba noma yikuphi kuphakathi kwama-ounces ayi-16-64 (0.5-2 amalitha) ngakunyeihora, kuya ngezinto ezifana nokushisa nezingubo (2, 3, 4).Agasti 9 2018
ukubuyekezwa kweculo elikhulu
Ungalahlekelwa Kanjani Amanzi Ubusuku Obubodwa Izimbangela Zokudla Kwesisu Okubangela Ukuthi Isisu Siphumule Uma Usudlile
Ulahlekelwa isisindo esingakanani ngehora?
Ochwepheshe bathi umuntu angakwaziulahlekelwenoma yikuphi kusuka kumakhilogremu angu-1-8ngehoraekushiseni okukhulu! I-athikili ephuma eHouston Chronicle ithi umuntu uzojuluka ngaphezu kwephawundi lamanziisisindophakathi, kuqhubeka iihora-gijima isikhathi eside. Nov.
Kufanele ugijime kangakanani ukunciphisa umzimba usuku ngalunye? Baningi bethu abazivocavoca umzimba, baya ejimini, futhi bazame ukudla okwehlukile, futhi sonke lesi sikhathi asikaze siqaphele ukuthi ukuhamba nsuku zonke yilokho izifundo eziningi ezibonisile akusebenzi kangako uma kuqhathaniswa namakhilogremu athe xaxa. Nalu uhlu lwemithetho ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule ngenkathi uhamba esikhundleni salo lonke iqembu lokuzivocavoca. Inombolo eyodwa, ukuthi ungakwenza kanjani ukuhamba kube isethi yokuzivocavoca.
Izici ezibaluleke kakhulu ezithinta ukusetshenziswa kwekhalori lapho uhamba yilezi: ibanga elihanjiwe, ijubane lakho nesisindo somzimba wakho. Ukuze uthole imiphumela emihle, gcina ishejuli ejwayelekile bese usebenzisa i-pedometer. Le divayisi ikukhombisa ukuthi ugijime kangakanani emini.
Uma umboze ibanga elide kepha namanje awukanciphisi isisindo, zingaki izinyathelo okufanele uzengeze ezingabala. Ungadluli, noma kunjalo. Qala ngokuhamba kancane futhi ukwandise kancane kancane usuku ngalunye.
Inombolo yesibili, zingaki izinyathelo okufanele uzithathe usuku ngalunye ukunciphisa umzimba. Khumbula ukuthi imiphumela izoncika kuzici zakho, indlela ophila ngayo, indlela odla ngayo, kanye nesimo sempilo yakho. Kufanele ngaso sonke isikhathi ubale inqubo yakho yokuzivocavoca ikhalori ngokucophelela okukhulu.
Ungalokothi ulandele uhlelo lomngane wakho noma ngabe nivivinya umzimba ndawonye. Wonke umuntu uhlukile futhi udinga uhlelo lwakho. Lokhu kulinganiselwa kuzokusiza wenze isheduli yakho. Amakholori ayi-100 alingana nezinyathelo ezingama-2 000 alingana nemayela elilodwa Amakhilogremu ama-2 alingana nezinyathelo eziyi-140,000 ezilingana nama-calories ayi-7,000 alingana namamayela angama-70.
Nazi ezinye izindlela ezilula zokuthuthukisa ukuhamba kwakho. Zama ukushayela okuncane noma uthathe ibhasi. Uma unesithukuthezi kalula ngokuhamba okude, zama ukulalela umculo wakho owuthandayo noma umsakazo.
ukungasebenzi kahle kwebhayisikili erectile
Uma unezingane, hamba uye nazo esikoleni. Ungazama futhi ukuhamba ngepaki nabo lapho usiya ekhaya, noma uguqule njalo umzila wakho ojwayelekile. Misa ukusebenzisa ama-elevator nama-escalators.
Okungenani inyanga. Thatha inja yakho uhambe ibanga elide. Kuzokwenza wena nenja yakho nibe nempilo enhle futhi nijabule ngokwengeziwe.
Uma ulandela le mithetho elula nsuku zonke, uzobona imiphumela ingakapheli inyanga. Futhi, ukwenza ukuhamba kwakho kube mnandi kakhudlwana, zama okulandelayo: ulethe umngane wakho, lalela umculo wakho owuthandayo noma i-audiobook ngenkathi uhamba, hamba ngezinyawo ezindaweni ongazijwayele, bese ukhetha imizila emisha. Ebusika, ungaqhubeka nokuzivocavoca ekhaya uma une-treadmill.
Ikuvumela ukuthi ubuke ama-movie noma imibukiso ye-TV ngenkathi uhlala usesimweni. Khumbula ukuthi izinyathelo zakho azilingani futhi zingahluka kusuka kunyawo kuya kumitha. Ukubala igxathu lakho, linganisa ibanga elingamamitha ayi-9 kuye kwangama-65 bese ulimboza ngejubane lakho elijwayelekile njengoba ubala izinyathelo.
Izinyathelo ezingaphansi kwezingu-70 ngomzuzu. Kumuntu onempilo, lelo jubane alinamphumela wokuqeqeshwa. Kunconywa ukuthi abantu balulame ekuhlaselweni yinhliziyo noma abane-angina enamandla. Izinyathelo ezingama-71 kuya kwezingu-90 ngomzuzu, amamayela amabili kuya kwamabili nengxenye ngehora.
Kunconywa abantu abanezifo zenhliziyo. Izinyathelo ezingama-91 kuya kwezingu-100 ngomzuzu, amamayela amabili nohhafu kuya kwamathathu ngehora. Kungumthwalo omuhle emzimbeni wakho ofanele noma yimuphi umuntu ophilile. Izinyathelo eziyi-111 kuya kwezingu-130 ngomzuzu.
Kuwumsebenzi omuhle kakhulu emzimbeni wakho, kepha ngisho nabantu abaphilile banobunzima bokugcina lejubane isikhathi eside. Manje ake sibheke imithetho yokuhamba okudingeka uyilandele. Okokuqala, qala ngomthwalo omncane bese ukhuphula kancane isikhathi nobude.
Kufanele ukhulise ubude bokuhamba kwakho kuqala, bese kuphela lapho wengeza ijubane. Ukulayisha kufanele kube okunengqondo ngempilo yakho. Zijwayeze ukuhamba kabili njalo.
Ukuhamba kanye ngesonto ngeke kukusize ngalutho. Uma ungakwazi ukuhamba nsuku zonke, kwenze okungenani kabili noma kathathu ngesonto. Kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi, kepha hhayi ngaphambi kwehora kuya kwehora nengxenye ngemuva kokudla.
Xhumana nodokotela wakho bese uhlolwa udokotela kathathu bese uphinda kanye noma kabili ngonyaka. Inombolo yesine, ngenkathi wenza lokhu, qaphela ukuma kwakho kokuhamba. Umzimba ophezulu namahlombe kufanele kuqonde futhi nesisu kufanele sidonswe.
Futhi, khumbula ukuthi ukuhamba kancane ibanga elifushane akusizi ngalutho. Kodwa-ke, uma uhamba ngejubane elikhulu futhi ungakulungele isikhathi eside, ungazilimaza. Buka ijubane lakho nokuphefumula kwakho.
Kufanele uzizwe ukhululekile ngenkathi uhamba. Ungathanda ukuba njalo? Ingabe kukusiza uzizwe ungcono nganoma iyiphi indlela? Yabelana ngolwazi lwakho kumazwana angezansi. Ungakhohlwa ukushaya inkinobho ethi 'Like' bese ucindezela inkinobho ethi 'Bhalisa' ukuze uthole uhlangothi oluhle lokuhlala empilweni.
ugibele ibhayisikili ligibela
Ngabe ngizohlisa isisindo uma ngingadli amasonto ama-2?
Uma uImaukudla, umzimba wakho uya “kumodi yendlala,” imetabolism yakho iyancipha ukuze usebenzise noma yikuphi ukudla okutholakalayo, kanyekwesisindo kuthandayehlisa kancane ijubane. Kunjalo,umauzila (ngokwengxenye) izinsuku eziningi nomaamasonto, wenaizoncipha.
Sonke siyazi ukuthi imoto yethu idinga uphethiloli ukuze iqhubeke nokusebenza. Umzimba wethu nawo udinga uphethiloli ngohlobo lokudla ukuze sikwazi ukusinda. Ukudla esikudlayo kusinikeza izakhi zomzimba ezahlukahlukene, njengamavithamini, amaminerali, amanzi, ama-carbohydrate, i-fiber, amafutha kanye namaprotheni.
Lezi zakhi zomzimba zinokusetshenziswa okuhlukile, njengokugcina izitho ziphilile futhi zisebenza kahle, ukugcina ubuchopho buhlelekile, kanye nokuqinisekisa ukuthi amangqamuzana ethu aqhubeka nokuvuseleleka. Lapho imoto iphela uphethiloli, iyema ukusebenza. Kwenzekani lapho umzimba uphela uphethiloli? Kwenzakalani? Yilokho esizokubona namhlanje kulesi siqephu sombukiso we-infographic, Yini Eyokwenzeka Uma Ungenzi Lutho Iviki Ngaphambi kokuba siphendule lo mbuzo, ake siqale sibheke inani lokudla okunconyiwe okufanele ulidle ku usuku olujwayelekile.
Amakholori asetshenziselwa ukukala okuqukethwe kwamandla okudla neziphuzo, futhi ngokusho kwe-website yolwazi yezempilo eku-inthanethi i-Healthline, owesifazane ojwayelekile udinga ukusebenzisa cishe ama-calories angama-2 000 ngosuku ukugcina isisindo kanye nama-calories ayi-1,500 ngosuku ukuze anciphise isisindo sesisindo ngesonto . Indoda emaphakathi idinga amakhalori angaba ngu-2 500 ngosuku ukugcina isisindo sayo nama-calories ayi-2 000 ngosuku ukuze yehlise iphawundi yesisindo ngesonto kumane nje kuyisiqondiso, futhi inani langempela lizoxhomeka ezicini eziningi ezifana nobudala, ukuphakama, isisindo kanye nezinga lomsebenzi . Ngakho-ke ama-calories ayi-2 000 noma ama-2,500 abukeka kanjani kuma-servings? Nazi izibonelo ezimbalwa: inkukhu eyosiwe inama-khalori angama-475 ngomlenze, i-6 oz salmon fillet inama-calories angu-350, kunama-calories angu-489 ngama-gramu ayi-100 (3.5 oz) we-granola eyenziwe, kanye ne-Starbucks 'Double Chocolaty Chip Frappuccino Blended Cream I-Whip Cream inama-calories angu-510, ama-4 awo ngosuku futhi unesilinganiso esiphezulu! Manje njengoba sesinombono wokuthi sidinga ukudla okungakanani nokuthi sidla amakhalori amangaki, ake sibone ukuthi kwenzekani uma sishiya konke lokhu kudla okumnandi bese silambisa umzimba uphethiloli amahora ayisithupha okuqala ngaphandle kokudla, konke ephelele akukho rmal; Abantu abaningi banezikhathi ezingamahora ayisithupha phakathi kokudla ngosuku olujwayelekile.
I-glycogen esemzimbeni wakho, enesibopho sokugcina amandla, yehliswa yi-metabolism yakho ibe yi-glucose, umzimba wakho oyisebenzisela uphethiloli. Ubuchopho bakho busebenzisa ama-25% alo mandla, okusele kuthathwa izicubu zakho zemisipha namaseli abomvu egazi. Kodwa-ke, uma usufinyelele ngaphezu kwamahora we-6, izitolo ze-glycogen ziyaphela futhi izinhlungu zendlala ziyavela.
Lapho ubuchopho buphelelwa ngamandla kungadala ukuthi abanye abantu bathukuthele futhi bangacabangi ngaphandle kokuthi basheshe bathole ukudla okuthandayo. Kodwa-ke, le mizwa ayihlali isikhathi eside, futhi umzimba wakho uguquguquka futhi ungene kulokho okwaziwa ngokuthi i-ketosis, isimo lapho umzimba uqala khona ukwehlisa amafutha akho amaningi uwenze amandla. I-Ketosis yisimo abasubathi abaningi abangena kuso, njengabagijimi be-marathon, abeza lapho bephelelwa yi-glycogen, futhi kukhona nokudla okuningi okudumile kwe-carb okusebenzisa i-ketosis ukusiza ukunciphisa isisindo.
Ngemuva kwamahora angama-72, izinto ziqala ukukubamba lapho ubuchopho bakho bunquma ukuthi budinga okungaphezu nje kwamaketoni ukuze uphile. Kulesi sigaba, umzimba wakho uqala ukwephula amaprotheni awo ukwenza i-glucose. Ngakho-ke umzimba wakho udla kahle izicubu zawo zemisipha ukuze uphile, futhi sisezinsukwini ezi-3 kuphela! Ngale kwaleli phuzu, amasosha omzimba aqala ukulwa ngaphandle kwamavithamini namaminerali abalulekile.
Lokhu kukwenza uthambekele kakhulu ezifweni futhi ekugcineni ufe. Njengoba umzimba uqhubeka nokuzidla kuze kungabikho mafutha, izinsalela zemisipha noma i-glucose zizosala, zikhuphule amathuba okuhlaselwa yinhliziyo ngenxa yokulimala kanzima kwezicubu zenhliziyo. Lokhu kuzwakala kunokhahlo futhi kungaphenduki, kepha ukuzama ukubikezela ukuthi le miphumela izohlala isikhathi esingakanani kumuntu kungancika ezintweni eziningi.
Umuntu onamafutha amakhulu uzoba nesikhathi eside sokusinda, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi amanzi athola umzimba kangakanani ukuthi ubaluleke kangakanani. Ngaphandle koketshezi, iningi labantu lifa kungakapheli izinsuku eziyi-10, kepha uma uketshezi lugcinwa ekudleni, umuntu angaphila izinsuku ezingama-20 kuye kwezingama-60 ngaphandle kokudla, yize imizimba yabantu eminingi iyeka phakathi nezinsuku ezingama-40. Yiziphi izikhathi ezinde kakhulu abantu abangazange badle ngazo? Sithole indaba kaRita Chretien, owayeseminyakeni yama-50 lapho yena nomyeni wakhe belahleka ehlane laseNevada ebusika bango-2011.
URita wasinda endlaleni izinsuku ezingama-49 esebenzisa iqhwa elincibilikile ukuthola uketshezi. Waba nenhlanhla yokubonwa abanye abazingeli abasebenzisa isimo sezulu esihle ngemuva kobusika. Kutholakale ukuthi wehlise cishe amakhilogremu angama-30 futhi njengoba ebengadlanga isikhathi eside, ubengakwazi ukudla zisuka.
Umyeni wakhe wanyamalala lapho eyofuna ukudla nosizo. Umzimba wakhe watholakala ngo-2012. Yiqiniso, lapho uhlela ukuhamba nge-adventure, kungcono ukuthi uzilungiselele kahle.
Iphephandaba laseBrithani iThe Guardian licaphune indodana yezithandani uRaymond ithi, 'Angicabangi ukuthi babeyilungele isimo sezulu sasebusika. Abayi ekhempini. Ezikhathini ezinde kakhulu lapho abantu bengadli khona, kube neziteleka zendlala, futhi azikho ezahlala isikhathi eside ukudlula ukuwa kwesakhamuzi saseNdiya esazalwa ngo-1931, uBhagat Singh.
I-India yayiphethwe amaNgisi ngaleso sikhathi, kanti uSingh wayeyingxenye yombutho wokuzimela wamaNdiya okuthiwa wambona evalelwe ejele wabulala abantu ababili. USingh wateleka esitelekeni ejele efuna indinganiso yezingubo zokugqoka kanye nenhlanzeko nokuyeka ukusebenza ngezandla ejele. Uhulumeni waseBrithani wazama ukugqashula ngokuzila ngokufaka izitsha zokudla esitokisini sakhe, kodwa uSingh wayezimisele kakhulu futhi akakaze akuthinte.
i-google maps izinkomba zokuhamba ngebhayisikili
Okumangazayo, wahlala izinsuku ezingama-63 futhi ngaleso sikhathi wayenesisindo esingamakhilogremu angama-119 kuphela engenakho ukudla kwanoma yisiphi isikhathi eside. Kodwa ingabe kunempilo noma kuyingozi ngokuphelele? Ukuzila ukudla sekuye kwathandwa kakhulu njengenqubo yezempilo eminyakeni yamuva. Kuyaziwa emphakathini wezempilo ukuthi kunezinkinga eziningi.
B. ukungadli izinsuku ezimbalwa. Inzuzo esobala ukuthi ingasiza ekunciphiseni isisindo lapho umzimba wakho uyidinga, kepha ezinye izinzuzo zezempilo kuthiwa zithuthukisa imetabolism yakho, yehlisa umfutho wegazi, futhi ivikele ubuchopho bomzimba wakho, futhi mhlawumbe iphinde inciphise inqubo yokuguga, yize abacwaningi abaningi awuvumelani nale mibono, ngakho-ke uke wabheka isikhathi esingakanani ngaphandle kokudla futhi kwakunzima kanjani? usazise kumazwana abekiwe! enye indatshana yethu enesihloko esithi Uyazi Ukuthi Ingakanani Ukudla okungama-calories angama-100?
Iyiphi indlela engcono yokwehlisa isisindo ngehora elilodwa?
Ukwehlisa isisindo ngehora elilodwa, gijima imizuzu engama-60 kathathu kuya kahlanu ngeviki ngejubane elilinganisiwe ngama-sprints ambalwa anzima aphonswe ukukhulisa ukushisa kwekhalori. Faka ihora elingeziwe lokulala enkambisweni yakho yasebusuku.
Ungasilahla kanjani isisindo esiningi ngangokunokwenzeka emahoreni angama-24?
Unganciphisa kanjani Isisindo Esiningi Njengamahora Angama-24 1 Phuza amanzi amaningi. 2 Vakashela i-sauna noma igumbi lesitimu. 3 Gwema usawoti wokwehlisa isisindo samahora angama-24. 4 Nciphisa ama-carbs osuku. 5 Yidla izithelo nemifino. 6 (izinto eziningi)
Ungasinciphisa kanjani isisindo ngokushesha ngesisindo?
Yehlisa ukuphuza uketshezi bese uphuza amanzi kuphela emahoreni angama-24 okuholela ekukalini. Ayinawo amakhalori futhi ithatha isikhathi esincane ukudlula ohlelweni lwakho kunezinye iziphuzo. Kepha ungayeki ngokuphelele ukuphuza, ngoba uma wenza kanjalo, uzonqamuka futhi unciphe amandla lapho ufika emncintiswaneni. Ukuncipha emsimbeni.
Eminye Imibuzo Kulesi Sigaba
ibhulakufesi lokwehlisa isisindo
Isisindo ibhulakufesi - izixazululo ezingaba khona
Ingabe ibhulakufesi liyakusiza wehlise isisindo? Olunye ucwaningo luphakamisa ukuthi ukudla njalo ibhulakufesi elinempilo kungakusiza ulahlekelwe isisindo esiningi futhi ugcine ukuncipha kwakho. Kepha olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi ukweqa ibhulakufesi kungahle kungabi kubi kuwe futhi kungasiza nasekulawuleni isisindo.
Ibhayisikili lokuzivocavoca lika-parkinson
Ibhayisikili lokuzivocavoca likaParkinson - ungaxazulula kanjani
Ingabe ibhayisikili elimile lilungele isifo sikaParkinson? Ukuzivocavoca ekhaya ngebhayisikili elimile usebenzisa uhlelo lokusebenza lokugqugquzela kanye nokuqapha okukude ukukhulisa ukuhambisana kunciphisa izinkinga zezimoto ezigulini ezinesifo sikaParkinson esimnene futhi kuthuthukise impilo yazo yenhliziyo, ngokusho kwemiphumela yokuhlolwa komtholampilo.
ukuzivocavoca ukulwa nokuguga
Ukuzivocavoca ukulwa nokuguga - indlela yokuphatha
Ingabe ukuvivinya umzimba kungakwenza ubukeke umncane? Izikhathi ezinwetshiwe zokuxineka kakhulu zingaba nemiphumela emangalisayo ekusebenzeni kwemizimba yethu, kufaka phakathi ukufaka ingcindezi emzimbeni wethu okwandisa imiphumela emibi yokuguga. Ngakho-ke, zivocavoca umzimba, ucindezeleke kancane, ubukeke futhi uzizwe umncane.
ngemuva kwezicathulo zokuzivocavoca
Ngemuva kwezicathulo zokuzivocavoca - imibuzo nezimpendulo ezibalwe kuhlu
Siyini isicathulo sokululama? Izicathulo zokubuyisa, izimbadada, nama-slip-ons kufanele anciphise ukuqaqamba kwangemva kokugijima nokuqina, nokubuyiselwa kwejubane. I-Okabashi, i-Superfeet, i-Oofos, i-Hoka One One, nezinye izinkampani zenza izicathulo ezinezinyawo ezinkulu ezinamagwebu nezinyawo ezinehaba. Izicathulo zinokubukeka kwezemidlalo nokuhlangana kwamathambo okungukuthi, okungcono kakhulu, i-dorky.
ukusebenzisa ibhendi yamandla
Ukusebenza kwe-Power band - ukuxazulula kanjani
Ingabe ukusebenza kwebhande lokumelana kusebenza ngempela? Amabhendi wokumelana ayithuluzi elikhulu lokuzivocavoca hhayi kuphela ngoba ayabizi kakhulu, ayathutheleka futhi enza izinto eziningi, kepha ngoba angasiza ukukhomba imisipha emikhulu kanye nemisipha emincane yokuzinzisa. 19 мар. 2021 г.
izinzuzo zokuzivocavoca ekucindezelekeni
Izinzuzo zokuzivocavoca ekucindezelekeni - ungaxazulula kanjani
Ukuvivinya umzimba kunciphisa kangakanani ukucindezeleka? Ososayensi bathole ukuthi ukubamba iqhaza njalo ekuzivocavoca nge-aerobic kukhonjisiwe ukwehlisa amazinga okuphela kwengcindezi, kukhuphule futhi kuzinzise imizwa, kuthuthukise ukulala, futhi kuthuthukise ukuzethemba. Ngisho nemizuzu emihlanu yokuzivocavoca nge-aerobic ingakhuthaza imiphumela yokulwa nokukhathazeka.
(c) 2021 cyclecopenhagen.dk. Wonke Amalungelo Agodliwe.